Madaxweyne Deni oo tacsi u diray ehelka Yuusuf Barda Cad
February 14, 2020 Mahad Jama 0
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaaya magaciisa iyo kan Goleyaasha Dowladda Puntland waxa uu ka tacsiyaynayaa geerida Alle ha u naxariistee Yuusuf Cismaan Samatar Bardacad oo ku geeriyoodey dalka Maraykanka.
Yuusuf Cismaan Samatar Bardacad Alle ha u naxariistee waxa uu ahaa Sharciyaqaan, Ruugcadaa Siyaasi Soomaaliyeed ah oo door muhiim ah kasoo qaatay halgankii Soomaaliya, hanaanka xisbiyada badan ee xukuumadihii 1960 ilaa 1969, isaga oo ka mid noqday Baarlamaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya.
Alle ha u naxariistee Yuusuf Cismaan Samatar oo soo noqday Guddoomiyihii Xisbigii SDU, waxaa uu Waxbarasho Jamacadeed oo lacag la’aan ah ka saacidey dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba kumanaan arday Soomaaliyeed oo maanta dalkooda iyo dadkoodaba u shaqaynaaya, una soo shaqeeyey, waxa uu ahaa siyaasigii Soomaaliyeed ee wakhtigii ugu badnaa maxbuus u noqda aragtidiisa.
Madaxweyne Deni waxaa uu mar kale uga tacsiyaynayaa shacabka Soomaaliyeed, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo qoysaskii uu ka geeriyoodey Yuusuf Cismaan Samatar Bardacad, wuxuuna Alle uga baryey inuu dembigiisa dhaafo, su’aasha qabriga u sakhiro, Jannadiisa Fardowsa ka waraabiyo.
Qayb kamida shaqaalaha Puntland oo Tababar uga furmay dalka Rwanda
FALANQEYN:Duulaanka Somaliland & Dulmiga Denni ee ganacsada P/land dan maku jirtaa?
DAAWO: Suuqii ugu weynaa Puntland ee Boosaaso oo xiran, M/weyne Deni oo ku adkeysanaya Canshuur dheeraad ah.
Hub urursi & Xiisad dagaal oo hor leh oo ka taagan Hadaaftimo
Xiisada u dhaxaysa dowladda & Jubbaland oo gaari rabta Mandheera
Maxaa looga hadlay shirkii maanta ee gollaha xukuumadda Somalia?
AKHRISO: Soomaaliya oo hanjabaad kulul u dirtay Kenya.
Bangiga horumarinta Afrika oo meel mariyey habka deyn cafinta Somalia
DEG DEG: Doorashooyinka Somaliland oo heshiis rasmi ah laga gaaray & Sadexda Xisbi.
Turkiga oo Yurub u fasaxay kumanaan Qaxooti ah oo ku sugnaa dalkiisa
Kenya oo ka jawaabtay eedayntii dowladda Somalia
Wararkii dagaal ka socda Dhuusamareeb & Khasaare ka dhashay
Amaanka caasimada dalka Kenya oo si weyn loo adkeeyey